Inona no matetika ao amin'ny vondrona Horukon fanahafana ny pachinko trano izy
トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Inona no matetika ao amin'ny vondrona Horukon fanahafana ny pachinko trano izy
Fanahafana ny vondrona, ho valin 'ny jackpot famantarana avy ao amin'ny Hall fanahafana ho an'ny vondrona tsirairay no ho izay novonoiny ny jackpot. Ny Strategy ny efitrano conserver f?fana, no efa nieritreritra dasa. Eto, ny efitrano conserver jerena avy ny fisamborana, dia te-hampahafantatra izay fantatra ho toy ny modely ao amin'ny vondrona fanahafana.
fanahafana ny vondrona ao amin'ny efitrano conserver f?fana, laharana farany fanahafana, ilany-by-lafiny fanahafana, dia nilaza fa misy karazany telo ny fanahafana tsy ara-dal?na. Anisan'izany, ny fanahafana dia hoy ny firenena lehibe indrindra, ilany-by-lafiny fanahafana ary efa variously antsoina hoe fanahafana ny farany, nefa tsy fantany na io no fomba ofisialy ao amin'ny toe-javatra maro.
dia ny fanahafana io no tena fahita, ilany-by-lafiny fanahafana koa fanahafana ny farany koa, toa ny teny izay dia mora ny hanamafy satria ny antony fa mora amin'ny fantatra. Satria tsy ny marina fa ny fandraisana ho mpikambana ho an'ny pachinko efi-trano dia afaka ho raisina, dia lasa zava-misy fa mety ho toy izany amin'ny tombantombana.
in izany no toetry ny fanahafana farany, ny faran 'ny latabatra izay dia mifandray amin'ny alalan'ny mpanova isa dia tsy miova sehatra ho vondrona iray. 1 vondrona no toa tokony ho dimy mitovitovy. Ohatra, ao amin'ny vondrona 20 ny nosy, dia ho ny zava-misy fa antoko-mpitory dimy misy ao amin'ny nosy.
Grouping izany, satria efa natao tao amin'ny efi-trano pachinko manontolo no ho fitoriana ao amin'ny efitrano conserver voasambotra. Izany koa dia ho tena matetika koa, ny ilany-by-lafiny fanahafana, ilany-by-lafiny iray, dia lasa vondrona efatra ny dimy, rehefa nahazo ny jackpot loteria, ny zava-misy fa ao aminy no zaraina jackpot ianao.
Na izany aza, tato anatin'ny taona vitsy, dia voalaza fa misy ihany koa ny efitrano fandraisam-bahinin'ny pachinko ny fampifangaroana ny fanahafana ny farany sy ny ilany-by-lafiny fanahafana. Raha toa ny ilany-by-lafiny fanahafana, ary ny farany dia mifangaro fanahafana, mba tsy mitovy amin'ny nosy, dia mamaritra Voalaza ho lasa sarotra kokoa kely. Anisan'ny
parlors pachinko, ary ny nosy ny ilany-by-lafiny fanahafana, satria ny nosy farany configurations no mifangaro, dia hoy izy haka ny fotoana fikarohana rehefa jackpot izay nitranga. io vondrona -Loop fizarana dia tena modely toy izany na inona na inona, ary avy eo dia efa fonosina ao anatin'ny maro ihany no mijoro, I zavatra jackpot miseho matetika ao anatin'ny vondrona iray ihany.
vao haingana anefa, maro ireo pachinko parlors izay nanorina ny iray amin'ny mpanova iray mba hisorohana ny korontana. Ny amin'izao zavatra izao, dia nanazava ny fisian'ny ny Grouping tsy maintsy manaraka foana intsony.
hevitra ny vondrona fanahafana, dia noheveriny fa ny base isan'ny jackpot tsy misy antony fotsiny ny hiaraka mitranga. Ao amin'ny fivarotana pachinko mba handeha hiaraka aminao, na tsia ny vondrona fanahafana resahina ao amin'ny efitrano conserver f?fana nampitoerina, dia mety ho mahaliana ny hijery indray mandeha.